Kade ngenza ukuhlolwa muva nje. Akuyona indlela yesayensi engiyithathile, kepha lapho ngibhala ifayili le- okuthunyelwe kwebhulogi ku-Starbucks lokho kunakwe kakhulu (A), nginqume ukukwenza Asigibele ukubona ukuthi kuzokwenzekani.
Esimweni esijwayelekile semidiya, bengizovumela i-buzz iqhubeke ngaphambi kokuyiphazamisa ngokuthunyelwe okusha nangesihloko esisha. Ngangiyoqhubeka nokuzama 'ukugibela igagasi', mhlawumbe ngize ngiqhubeke nengxoxo kokuthunyelwe okungu-2 noma okungu-3 okungeziwe. Yize lokho kungenzeka kusize ekugcineni inani le- (B) okwesikhashana izivakashi ezingithole amahora angama-48 kuya kwangu-72 ngemuva kokuthunyelwe, nginqume ukuthi kufanele ngiqhubeke nokuthumela nsuku zonke - okwami core abafundi (C) abaqhubeka nokubuyela kubhulogi yami.